Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Raharaham-panjakana • Other • Safety • Fampihorohoroana sy heloka bevava ho an'ny mpandeha: • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao mivalona • News News
Home » Lahatsoratra » Fampihorohoroana sy heloka bevava ho an'ny mpandeha: » Ny fitifirana faobe dia namela olona 13 farafaharatsiny naratra tany Austin, Texas
Nanentana ny vahoaka ny Sampan-draharahan'ny polisy ao Austin mba hanalavitra ny faritra 6 Street. Nofaritana ho toy ny “korontana” ity tranga ity, izay milaza fa mbola manampoto ny raharaha ny tompon'andraikitra.
"Fanafihana mavitrika" dia nitranga tao afovoan-tanànan'i Austin, TX tamin'ny sabotsy teo
Farafahakeliny roa amin'ireo naratra no naiditra hopitaly tamin'ny aretina mafy
Manampy ny polisy ao an-toerana ny masoivohon'ny Vondron'asan'ny FBI mpampihorohoro iraisan'ny FBI
Farafahakeliny olona 13 no naratra vokatry ny tifitra variraraka notantarain'ny Austin-Travis County Emergency Medical Services ho toy ny “fanafihana mavitrika”, tao afovoan-tanànan'i Austin, TX tamin'ny sabotsy teo.
Raha ny filazan'ny sampana mpamonjy voina ao an-toerana dia farafahakeliny roa amin'ireo naratra no naiditra hopitaly tamina aretina mafy, roa hafa kosa naratra tsy nisy ainy. Tsy fantatra mazava ny satan'ireo antoko maratra hafa.
Lahatsary mivezivezy an-tserasera dia mampiseho ireo niharam-boina marobe nianjera tamin'ny tany teo afovoan'ny arabe iray be olona, ​​niaraka tamina polisy sy mpamonjy voina marobe.
Nandositra ny toerana nitrangan'ny loza ity olon-dratsy ity ary mbola afaka kosa. Ny polisy dia nanome famaritana ankapobeny momba azy, miaraka amin'ny Lehiben'ny polisy vonjimaika Austin nilaza tamin'ny fampahalalana vaovao fa ilay nanafika dia inoana ho lehilahy mainty "mahia" amin'ny volon-dreadlock. Nilaza i Chacon fa mbola tsy fantatra izay antony nitifirana azy ireo.
Nalefa tany an-toerana ny zandary mpanao fikarohana, famonoana olona mahery vaika, heloka bevava voarindra ary vondron-jiolahimboto mba hanadihady ny zava-nitranga. Manampy ny polisy ao an-toerana ihany koa ireo masoivoho avy amin'ny FBI Joint Terrorism Force Force.